Laba Nin oo Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta Ay la doonayaan Madaxtinimada Dowladda Federaalka Soomaaliya WARBIXIN.
Monday October 31, 2016 - 16:09:57 in Wararka by Super Admin
Dowladaha shisheeye ee gumeysta Soomaaliya ayaa dadaad dheeri ah ugu jira sidii ay isbedel ugu sameyn lahaayeen hoggaanka dowladda Federaalka.
Xilli uu cirka iskusii shareerayo isqabqabsiga u dhaxeeya Hoggaanka dowlada Federaalka iyo guddiga doorashooyinka dadban lagu daray maamul goboleedyada ayay dowladaha shisheeye go’aan rasmi ah ka qaateen cidda noqonaysa madaxweynaha soo socda.
Magaalada Abu Dhabi ee wadanka isku tagga imaaraadka Carabta waxaa lagusoo gaba gabeeyay kulan gaar ah oo u dhaxeeyay qaar katirsan hoggaamiyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta.
Kulanka oo ujeedkiisu ahaa sidii dowladaha Mareykanka,Itoobiya iyo imaaraadka Carabta ay go’aan uga gaari lahaayeen shakhsiga noqonaya madaxweynaha dowladda Federaalka.
Ilo waredyo mas’uul ah ayaa sheegaya in dibulumaasiyiin ka socday Mareykanka iyo Itoobiya ay laba maalmood ka hor ku biireen kulanka oo markii hore u dhaxeeyay dowladda imaaraadka iyo Hogaamiye goboleedyada.
Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka ayaa Cabdi Wali,Gaas,Shariif Sakiin,C/kariim Guuleed, Cali Cabdullaahi Cosoble iyo Axmed Madoobe gacanta ka geliyay liis ay ku cadyihiin shakhsiyaad lala doonayo in ay kusoo baxaan doorashooyinka soo socda.
Dowladda Imaaraadka oo kulanka soo qaban qaabisay ayaa muhiimad gaar ah ka leh arrimaha Soomaaliya waxayna xusul duub ugu jirtaa sidii boobka dhaqaale ee dalka ka socda ay ugala wareegi laheed dowladda Turkiga.
Isku tagga Imaaraadka waxay si cad hoggaamiye kooxeedyada Abu Dhabi ku shiray ugu sheegtay in aysan doonayn in Xasan Gurguurte uusan kusoo laabto talada dowladda Federaalka madaama uu u dhowyahay Turkiga oo shirkadihiisa dhaqaalaha ku wareejiyay Dekadda iyo Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Sidoo kale Imaaraadku wuxuu ka baqdin qabaa in haddii siyaasi Turkiga u janjeera kusoo baxo doorashooyinka uu laalo heshiiskii Shirkadda DP kula wareegtay dekadda magaalada Berbera.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladaha Itoobiya iyo Mareykanka oo saameyn ku leh siyaasadda DF-ka ay Imaaraadka Carabta ku waafaqeen in Xasan Gurguurte uusan soo laaban.
Warar lagu kalsoonaan karo waxay sheegayaan in laba siyaasi loo calaamadeeyay xilka madaxtinimada Dowladda Federaalka, shakhsiga koowaad ayaa ah Nin lagu Magacaabo Jibriil Ibraahim Cabdulle iyo siyaasi kale oo warbaahintu aysan wali magaciisa helin balse ah ganacsi hanti ku leh Imaaraadka carabta islamarkaana haysta laba Baasaboor oo midna yahay Itoobiyaan midna UAE.
Jibriil Cabdulle ayaa la sheegay in Mareykanku taageersanyihiin halka Imaaraadka iyo Itoobiya ay wataan Nin siyaasadda Somalia ku cusub balse ah ganacsade laba dhalasho haysta.
Hoggaamiyaasha maamul goboleedyada eeisku tagga imaaraadka Carabta ku kulmay ayaa lasoo siiyay Jeegag ay lacago uga qaadan karaan Bankiyada Mareykanka iyo imaaraadka haddii Ergada baarlamaanka wax dooran doona ku qanciyaan in ay doortaan mid kamida shakhsiyaadka lasoo xulay.
Sidoo kale UAE ayaa ballan qaaday in mashaariic hurumarineed ay ka fulin doonto deegaaanada ay maamulaan Puntland Koonfur galbeed,Galmudug,Jubbaland iyo Hirshabeelle.
Dhammaan madaxweynayaashii soo maray dowladda Federaalka ayaa ahaa kuwa ay wataan dowlado shisheeye oo ka shaqeyn jiray danta hadba dowladaha soo saaray kursiga madaxweynanimada.
Doorashadii ugu dambeysay ee Xasan Sheekh madaxweynaha ku noqday ayaa la sheegaa in natiijada kasoo baxday ay ka dambeeyeen dowladaha Turkiga iyo Qadar oo lacago malaayiin dollar ah siiyay Gurguurte sidaasna uu ku noqday madaxweyne.
Soomaaliya oo duullaan caalami ay kusoo qaadeen Dowlada shisheeye ayaa la filayaa in xaaladdu sii xumaato, kumanaan katirsan ciidamada AMISOM ee Somalia ku sugan ayaa awoodi waayay in ay wiiqaan xarakada Shabaabul Mujaahidiin.